Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် သံသန့်ရှင်းရေး ထုတ်လုပ်သူနှင့် သံသန့်ရှင်းရေး ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. အရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်တယ်, ဒီလိုအဖြစ် သံသန့်ရှင်းရေး ဒါကြောင့်အပေါ်နှစ်ကျော်ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်တည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့၏ဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏အရေးပါဆုံးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ အနာဂတ်၌ငါတို့သည်သင်တို့ထိုက်တာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အထောက်အပံ့နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုအားဆက်ကပ်အပ်နှံထားရှိပါသည်။ သင်သည်ဤလိုအပ်ချက်ရှိပါက OEM သို့မဟုတ်နှစ်ဖွဲ့အခါတိုင်းကြိုဆိုပါ!
ကျနော်တို့၏ကျယ်ပြန့် fabricating အတွက်အထူးပြု
။ ငါတို့ဥစ္စာထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကစုံလင်အကုန်အစင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံစံ - PACA-106
သံအတွက် Polishing သန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်
ဤထုတ်ကုန်သည်သာမန်သံမဏိ၏ဓာတုဗေဒအရောင်တင်မှုအတွက်သင့်တော်သည်,low carbon steel နှင့် carbon steel.အဆိုပါပွတ်သံမဏိမျက်နှာပြင်မှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်.၎င်းကိုအကြိုအတွက်အသုံးများသည်-plating နှင့်သိသိသာသာထုတ်ကုန်များ၏တောက်ပတိုးတက်စေနိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/iron-cleaner.html
သံသန့်ရှင်းရေး ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ သံသန့်ရှင်းရေး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ
သတ္တုသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အရောင်တင်အေးဂျင့်သန့်စင်စက်သည်ကွဲပြားသောကုန်ကြမ်းဖော်မြူလာများကိုမတူညီသောပစ္စည်းများအတွက်ညှိပေးလိမ့်မည်.ခိုင်မာသောအရောင်တင်နှင့်သန့်ရှင်းရေးစွမ်းရည်,တိုတောင်းသောအပြောင်းအလဲအချိန်နှင့်ခိုင်မာတည်ငြိမ်မှု. လျှောက်လွှာ:သန့်ရှင်းရေးအတွက်ဓာတုပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ,deburring နှင့်မှိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ polishing. ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ရိုက်ပါ:အရည် အဆင့်အတန်း:စက်မှုအဆင့် အသွင်အပြင်:အရောင်မဲ့ပွင့်လင်းသောအရည် pH တန်ဖိုး:၆-၈(10%ဖြေရှင်းချက်) သတ်မှတ်ချက်:စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုလက်ခံပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:ပလတ်နှင့်အတူဒရမ်MOQ:ကီလို ၆၀၀